सबै खोलि दिए अनि मेरो एउटा हात उसको पुती तिर लगे - Indian Girls Nude XXX Images
सबै खोलि दिए अनि मेरो एउटा हात उसको पुती तिर लगे
भोलि पल्ट बिहान ८ बजे तिर त्यो भाई आयो तर मैले भएको छैन बेलुका बनाएर घर मा ल्यैदिन्छु भनेर फरकाईदिये । दिउस पनि कतै नगई सबै एउटा अर्को कम्प्युटर मा कपी गरे अनि त्यो सी.पी.यू बोकेर उसको घर गए । घर गएर कम्प्युटर जोड्दै थिए एक जना केटी चिया लिएर मेरो नजिक आइपुगी । को रहेछ भनेर हेरेको त फोटो को केटी ….. मेरो त जिउ नै सिरिङ्ग भयो । के भएको रैछ सर यो कम्प्युटर लै भनेर सोधी । मैले भाईरसले सबै डाटा खत्तम पारेको रैछ । कम्प्युटर खुलेन सबै फोर्मात गर्नु पर्यो त्येसैले यो कम्प्युटर मा केहि पनि छैन । गीत हरु थिए भने सबै गए भने । उसले गीत त होइन उसको कलेज को प्रोजेक्ट थियो ला बर्बाद भयो भनि । मैले कलेज को प्रोजेक्ट त म संग जति पनि हुन्छ चिन्ता गर्नु पर्दैन भने । अनि उ खुसि भइ । मैले केहि पर्यो भने फोन गर्नु भने अनि उसलाई आफ्नो नम्बर दिए । एक दिन पछि उसले मलाई फोन गरि र प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बारे मा सोधी मैले कसैलाई पनि नभन्ने हो भने मात्र मिलाई दिन्छु भने अनि उसलाई १००० लाग्छ फोटोकपी र तयार गर्न भने र उसलाई पैसा लिएर आउन भने तर उसले होस्टेल भएको ले निस्किन मिल्दैन म पहिले भेटेको घर मा होइन घर मा त म छुट्टी मा पो गएको भनि । मलाई जसरी पनि त्यो फोटो मा देखेको सबै कुरा प्रतक्ष्य हेर्नु थियो र त्यो केटी संग यौन सम्पर्क गर्नु पनि थियो त्येसैले जसरी भए पनि उसलाई फ़सौनी उपाए रच्दै थिए । उसलाई पनि प्रोजेक्ट को लागि अलि हतार थियो होला मलाई फोन गरेर कहाँ लिन आऊ भनेर सोधी, मैले मेरो घर मा आऊ केहि मिलेन भने मिलाउनु पर्छ भने उसले हुन्छ भनि र मेरो घर आइ ।
मेरो घर मा कोहि पनि हुँदैन प्राय त्येसैले मलाई सजिलो भयो। मैले उसलाई कुन सब्जेक्टको भनेर सोधेको थिएन तर म संग भएको उसको नै परेछ । उसले कम्पुटर चलाउदै गइ चलाउदै गइ अनि मैले चिया पकाएर दिए अलि खुलेर कुरा हुन थाल्यो । अनि होस्टेल मा को को छ भनेर सोधे, उसले थुप्रै साथी हरु छन् भनेर भनि , BOYFRIEND छ कि छैन भनेर सोधेको छैन भनि । उसको काम आज नसकिने भयो अनि उ भोलि बिहान आउछु भनेर भनि । म भने उसको फोटो सम्झिन्दै बसे अनि उसको कसिएको शारीर हेर्दै तर अलिकति पनि छुन सकिएन किन भने उ भड्किने डर थियो त्येसैले जति यौन सम्पर्क गर्न र उसलाई नाङ्गो हेर्न चाहे पनि खपेर बसे । भोलि पल्ट बिहानै पो आइछ उ त म त उठेको पनि थिइन । तर उसले बोलाको सुनेर उठे अनि लगाएको trouser फुकालेर अलि बाहिर बाटै मेरो लाड़ोको डाम देखिने गरेर कट्टु लगाएर ढोका खोल्न गए । ओह हो तिमि पो एती बेला……. ला…… मैले त अरु साथी आएछ भनेर केहि नलगाई आए “सो sorry” भने उसले ठिकै छ भनि अनि मैले फोन गरेको जस्तो गरे एकछिन् उसलाई मेरो लाड़ो हेर्न दिन र उसले मेरो तल हेर्दै थी मलाई पनि राम्रो लाग्यो । मैले कम्प्युटर मा थुप्रै नाङ्गो फोटो राखेको थिए अनि उसले फोटो सर्च गर्दा भेटिछ केहि बोलिन मा अर्को कोठा बाट हेर्दै थिए उसले मैले हेरेको पत्तै पाईन ।
त्यो केटी को दूध पनि हेर्दै थिए , अनि चाक पनि , झन् थाई त कस्तो सिलिक्क परेको थियो के गर्ने केहि गर्ने मौका नै मिलिरा थिएन । त्येतिकै मा उसलाई अल्छि लागेछ Type गर्दा गर्दा अनि उसले भनि दाई म एक छिन् बाहिर गएर आउछु है भनेर मैले उसलाई किन बाहिर जाने म तिमि लाई अल्छि लागेको भगाई दिन्छु भने अनि उसलाई एउटा कुरा सोधे, सुन त तिमि लाई म केहि सोध्छु है भने , उसले हुन्छ भनि , अनि मैले सोधे ” केटी हरु लाई कस्तो केटा मन पर्छ मलाई एउटा केटी एकदम मन पर्छ तर त्यो केटी ले मलाई हेर्दै हेर्दिन भने . उसले हो र त्यो केटी लाई गएर राम्रो संग कुरा गर्नुस भनि त्येतिकै मा मेरो तल ढोका मा को आयो . मैले त्यो केटी लाई तिमि लुक भनेर भने अनि अर्को कोठा मा लगेर लुकाए . मेरो साथी आएको रैछ त्येसैले त्येसलाई बाहिर बाट पठाए अनि उसलाई लुकको कोठा मा गए . भित्र छिरेकोत उसले मलाई को आएको रैछ भनेर सोधी मैले मेरो साथी उसको केटी साथी लिएर आएको रैछ मैले मेरो काकी हुनु हुन्छ भनेर फर्काई दिए भने ।
उसले ध्यान दिएर सोधी किन केटी लिएर आएको भनेर . मैले मेरो साथी ले केटी लाई यहाँ ल्याएर यौन सम्पर्क गर्छ भनेर भने, त्यो सुनेर उसको मुख रातो भयो । अनि मैले उसलाई तिमि ले sex गरेको छ कि छैन सोधे उसले छैन भनि अनि मैले उसलाई कम्प्युटर मा देखेको फोटो को बारे मा भने अनि उ रिसाई मैले उसलाई सोर्री भने अनि उ बाहिर जान खोजि मेरो घर बाट मैले उसलाई समातेर ताने अनि उसको ओठ मा चुस्न थाले । त्यो समय मा मेरो हात उसको पुरा शारीर मा डुली रहेको थियो । अझै उ म बाट भाग्न खोज्दै थि तर मैले पुलिस केस भए हुन्छ यसलाई जसरी पनि चिक्चु भनेर सोचे र उसको दूध माड्दै गए माड्दै गए । दूध त ढुंगा जस्तो रैछ अनि ओठ को त कुरा नगर्नुस कसको कमलो… झन् पुती त कसिएको अनि अली अली मात्र रौ आएको । २० मिनेट जति दूध माडीसके पछि अलि थाकेको जस्तो भइ उ अनि मैले अलि बिस्तार बिस्तार उसको कपडा खोले म अलि बलियो भएको ले अलि सजिलो भयो तर त्येस्तो फोटो राखनेले एति दुख डेली जस्तो चै लागेको थिएन अलि सजिलो संग होला जस्तो लागेको थियो ।
त्येतिकै मा मैले उसको ब्रा, Pantee सबै खोलि दिए अनि मेरो एउटा हात उसको पुती तिर लगे उसले पनि अहिले केहि भनिन बरु अलि एमोशन मा आएको जस्ती भइ . अनि मैले उसलाई बिस्तार बिस्तार गरेर मेरो लाड़ो उसको पुती मा लगेर हाले . बिस्तार बिस्तार गरेर चिरौनी प्रयास गरे तर धेरै गारो भयो उसलाई पनि पहिलो पल्ट भएर होला धेरै नै गारो भएको थियो . अहिले त दुख्यो भनेर रुन पो थाली बल्ल बल्ल गरेर छिराए . उसको पुती बाट रगत आयो तर १० मिनेट पछि अलि ठिक भयो उसले पनि हल्ला गर्न बन्द गरि र मैले मजाले चिके . केहि बेर पछि मा पुरा थकित भए मेरो पुरै झर्यो अनि उसको पनि . अनि मैले भने मेरो एस्तो प्लान त थिएन तर के भयो के मा त एस्तो रक्छेस पो हुन पुगेछु । उसले मलाई धेरै बेर हेरी मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो … अनि उसले सोधी मेरो पेट मा बच्चा बस्यो भने ? मैले बस्दैन भने अनि उसले तपाई को जाल मा परेछु म मलाई केहि थाहा थिएन यो सबै कुरा मैले एक पल्ट ब्लु फिल्म हेरेको थिए भनि अनि मैले माफ मागे . तर अब हामी राम्रो साथी हुनु पर्छ है भने …..
← मलाई बल्ल सेक्सको स्वाद थाहा भयो	“छिटो लुगा खोल्नुहोस न ” उर्मिलाले भनि →